Somaliland oo Xaalad quus ah kagashay Tukaraq & Weerar …. – Aragti Qaran
You are here: Home WARARKA CUSUB Somaliland oo Xaalad quus ah kagashay Tukaraq & Weerar ….
Somaliland oo Xaalad quus ah kagashay Tukaraq & Weerar ….
Warsidaha Aragtiqaran.com ayaa ogaaday in wafdi ka socda Somaliland ay gaareen magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasna ay kula kulmeen wakiilada caalamiga ah ee kusugan dalkaas, kuwaas oo inta badan la socda arrimaha siyaasadda ee gudaha Soomaaliya.
Wafdigan ka socda Somaliland waxay si toos ah wakiil uga yihiin Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka baaqsaday safar uu kutagi lahaa magaalada Nairobi, loogana hadli lahaa arrimaha ku saabsan muranka dhinaca dhulka ah ee kala dhaxeeyo maamulka Puntland.
Wasiirka Arrimaha dibada ee Somaliland Sacad Cali Shire iyo xubno kale oo ay ku jiraan Lataliyaasha gaarka ah ee Muuse BIixi, waxay wada hadal la yeesheen xubno ay ka mid yihiin Safiirada Reer Galbeedka & UK, oo kala hadlay in ay ciidamadooda kala baxaan deegaanada cusub ee ay soo galeen bilowgii bisha January 2018-kii.
In ciidamada Somaliland ay dib ugu laabtaan deegaamka Gambara ayaa kamid ah qodobada ugu waa weyn ee laga wada hadlay, waxaana xog ay heshay Aragtiqaran.com ay daaha ka rogaysaa in ay Somaliland hadda raadinayso damaanad ku aadan in ciidamada Puntland aysan ka soo gudbin deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool.